यी ३ रोग भएका ब्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् काउली – Sandesh Press
June 21, 2021 419
काठमाडौँ । जाडौ मौसमका काउलीको तरकारी खान धेरैले रुचाउँछन् । यसलाई मानिसहरुले तरकारी मात्र होइन् पराठा तथा पकौडा समेत बनाएका खाने गर्दछन् । काउलीको तरकारी खानु स्वास्थ्यको लागी पनि लाभदायक हुन्छ । यसमा भिटामिन, क्याल्सियम, प्रोटिन, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, आइरल, मिनरल्स, एन्डिअक्सिडेन्ट, फाइटोन्यूट्रियन्ट्स, फ्लेवोनोइड्स, फाइटोन्यूट्रियन्स लगायतका तत्वहरु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
यसले हामीलाई शरिरमा लाग्ने घातक रोगहरु एनिमिया, स्तन क्यान्सर, मुटुरोगबाट पनि बचाउँछ । तर डाइटिसियनका अनुसार काउलीको तरकारी केही रोगीहरुको लागी खतरनाक हुन्छ । जान्नुस् ,कुन कुन रोग हो ? थाइराइडका बिमारी: काउलीको तरकारी थाइराइडको बिरामीको लागी खतरनाक हुन सक्छ । किनभने यसमा गाइट्रोगन नामक तत्व पाइन्छ । जसले थाइराइडलाई असर पुर्याउने काम गर्छ ।
ग्याष्ट्रिकको बिरामी: ग्याष्ट्रिकको बिरामीको लागी पनि काउलीको तरकारी खतरनाक हुन्छ । किनभने काउलीमा पाइने पोषक तत्वले पाचन प्रणालीमा समस्या पैदा गर्दछ । त्यसका साथै स्तनपान गराईरहेकी महिलाले पनि काउलीको तरकारी खानु हुदैन् । यदि खाएमा ग्याष्ट्रिकको समस्याले सताउन सक्छ ।
ब्लड क्लटिङको समस्या भएको बिरामी: काउली शरिरमा ब्लड क्लटिङको समस्या भएको बिरामीको लागी पनि खतरनाक हुन्छ । किनभने यसमा पाइने भिटामिन के ले ब्लड क्लटिङमा समस्या पैदा गर्दछ । त्यति मात्र होइन् , रगतलाई गाढा बनाउने औषधि सेवन गरिरहेका महिलाहरुले पनि काउली खानु हुदैँन् ।
Prevकोठा नदिएको भन्दै घरबेटी लाई मुद्धा हालेपछि, अब घरबेटी संघले सबैको कोठा खाली गर्ने धम्की !
Nextसविता भण्डारी मृत्यु प्रकरण : आमा, बुबा र बहिनीले रुदै गरे यस्तो खुलासा , सबितालाई दोस्रो श्रीमती को रुपमा भित्राएका सविताको श्रीमानको पहिल्यै पनि बिबाह भै सकेको रहेछ (भिडियो)
ऐश्वर्या र अभिषेकबीच खटपट, ऐश्वर्या र जया बेग्लाबेग्लै बस्न थाले ! बच्चन परिवार किन मन पराउँदैन ऐश्वर्यालाई ?